Steve mabasa aive nazvo chaizvo. adobe inogumisa rutsigiro rwechiedza
Kuru Nhau & Ongororo Steve Jobs aive nazvo chaizvo. Adobe inogumisa kutsigira Flash
Unogona kuyeuka kuti kumashure munaKurume 2010, Steve Jobs aive parwendo rwekushambadzira rwe Apple iPad uye mukupindura mubvunzo kubva kumutori wenhau, akatsanangura kuti nei iPhone nePadad vasina Adobe Flash yakaiswa . Iyo yekupedzisira ipuratifomu yemultimedia inoshandiswa yeanoratidzira. Ads nemavhidhiyo mitambo inomhanya paFlash yaisazoonekwa pane chero chishandiso uye Apple & apos; s CEO yainongedzera kwairi se'CUU hogi. ' Akaitumidzawo 'ngoro' uye izere nema & apos; maburi ekuchengetedza. ' Ichowo chaive bhatiri dhizaini apo Apple yakayedza iyo pane iyo iPad. Mwedzi wapfuura, Mabasa akarwisa Adobe panguva yeGuta Horo Q & A chikamu chevashandi veApple. Mabasa akadaro panguva yechiitiko ichi kuti iyo isingawanzo nguva iyo Mac inopunzika, inowanzo kuve nekuda kweFlash .
Kwete kuti mubi haikwanise & apos; t svitsa muhomwe yake yemashiripiti uye ubudise iPhone inomhanya Adobe Flash. Vhidhiyo yakadaro yakaonekwa munaJune 2010 kuratidza yaidaidzwa kunzi & apos; iwo chaiwo matanho ekutanga 'eFlash kubvamburwa pane iOS ruoko. Asi zvese zvakaipa zvinotaurwa neMabasa, madhiragi, kudhiraina bhatiri, uye kushomeka kwenyaya dzekuchengetedza zvaisazoparara nemashiripiti.
Google , kune rimwe divi, yakagamuchira Adobe Flash muiyo ecosystem yeAsiyokusiyanisa maringe neIOS. Iyo Motorola DROID neNexus One yaive maviri efoni dzinoverengeka dzeApple dzakagamuchira Flash . Nepo nharembozha Flash yaibvumidza kushambadza kwehupenyu uye mimwe mitambo yemavhidhiyo kumhanya pane bhurawuza, yainonoka uye yakanyatso bvisa bhatiri pane mamodheru aive naro. Asi kunyangwe vateveri veApple vaifanira kubvumirana nezvakataurwa naSteve Jobs nezve Flash uye Adobe akazopedzisira adhonza ipulagi kutsigira iyo mobile vhezheni ye software.
Nezuro raive risiri chete zuva rekupedzisira ra2020, raive zuva rekupedzisira Adobe kutsigira Flash Player . Uye mushure meNdira 12 wegumi wa2021, Flash zvemukati zvichadzivirirwa kumhanya pane plug-in. Uye sezvazvinoitika, Steve Jobs anga akarurama nekufona kwake kuti HTML5 inotsiva Flash. Izvo zvakatanga muna 2015 apo maapplication akaita seYouTube akatsiva Flash neHTML5. Iyo yaimborumbidzwa desktop uye nharembozha yeplatifomu ikozvino yaenda nemheni.
kesi yakanakira lg g7 thinq
HBO Max yave kuwanikwa mahara neAT & T & apos; sakanakisa isina waya hurongwa
Zvemashiripiti: Iyo Gathering Arena kunze izvozvi paGoogle Play Yekutanga Kuwana kwekusarudza madivayiri eApple
Heino Samsung Samsung Cherechedzo 9 S Peni vs Cherekedza 8 S Peni pikicha
Ndeapi & apos; s mamiriro eiyo T-Mobile uye Sprint kubatanidzwa? Iro & apos; s zuva, taura kuita-kuvhara mabhangi
Don & apos; simuka kunge LG G6: chete maUS neCanada mamodheru ndivo vanozowana isina waya kuchaja, chete veAsia ndivo vanowana Hi-Fi odhiyo.